Danjire Mareykan ah oo xulafo dhow lahaa Donald Trump oo is-casilay
WASHINGTON, US – Danjirihii Mareykanka u joogay Jarmalka Richard Grenell, kaas oo xulafo dhow la ahaa madaxweyne Donald Trump, ayaa xafiiska baneeyay kadib in ka badan laba sano oo jagadaas uu hayey.
Afhayeen u hadlay safaaradda ayaa Talaadadii xaqiijiyey arrintaas, wallow uusan bixin fahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sababta.
"Ambassador Grenell wuxuu ka tegay xilkaan iyo Waaxda Arrimaha Dibadda 1-dii bisham June," ayuu hadalkiisa kusoo koobay afhayeenka.
Robin Quinville, oo ahaa ku xigeenka madaxa howlgalka safaaradda, ayaa sii ahaan doona safiirka illaa iyo laga soo magacaabayo wakiilka cusub oo aan la ogeyn hadii Aqalka Cad ay soo xuli doonto.
Mudadii labada sano ahayd ee diblumaasiga uu ahaa, Grenell ayaa fagaareyaasha kusoo bandhigi jiray dhaliilaha uu u hayo xulafada Mareykanka iyo siyaasadda Jarmalka ee ku wajahan gaashaanbuurta NATO.
Wakaaladda wararka Jarmalka ee DPA ayaa bishii lasoo dhaafay warisay in Grenell uu is-casilayo kadib markii Senator Mareykan ah uu xaqiijiyey John Ratcliffe laga dhigay agaasimaha joogtada ah ee hay'adda DNI.
Bishii Febraayo ayaa la aaminsan yahay in 53-sano jirka Grenell oo xulafo dhow la ah Trump loo magacaabay agaasimaha joogtada ah ee DNI, oo ah Hay’adda Sirdoonka Mareykanka oo kamid ah kuwa awooda leh.
Afhayeen u hadlay Ciidanka Cirka Germany ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ay baarayaan sababta keentay shilka.
Trump oo si lama filaan ah uga hadlay wararka la xiriira caafimaadka Kim
Caalamka 25.04.2020. 07:50
Xubno ka tirsan Congress-ka Mareykanka oo laga helay COVID19
Caalamka 19.03.2020. 09:38
Go'aan ka dhan ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM oo la shaaciyey
Soomaliya 26.02.2020. 07:01
Mareykanka oo baaq u diray madaxda DF Soomaaliya iyo Maamulada
Soomaliya 05.02.2020. 21:43
Soomaliya 23.01.2020. 18:00